Làlan'ny Ferro any Andorra | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, General, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Sary | Fitsangatsanganana ambanivohitra
Iray amin'ireo làlana tsotra indrindra hanombohana ny ankizy amin'ny fitsangatsangana dia ny Ruta del Ferro ao Andorra. Tena mora azo izy io ka azo atolotra an'iza ho an'iza na firy taona na toe-batana.
Ny anaran'ny zotra io dia manondro ny maha-zava-dehibe ny varotra vy ho an'ny Principality of Andorra, amin'ny ankapobeny, ary ny paroasy Ordino, indrindra, nandritra ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Izy io, noho izany, dia làlana iray izay mampiharihary amintsika ny lanjan'ny hetsika metaly any amin'ity faritany ity miaraka amin'ireo sary mahafinaritra an'i Andorran.
1 Ny lalan'ny Ferro
2 Làlan'ny lalan'ny ral
3 Torohevitra hanatanterahana ny zotra Ferro
Ny lalan'ny Ferro
Ny zotra Andorra dia làlana ara-kolontsaina sy voajanahary izay mitatra amin'ny toerana hafa any Pyrenees, toa an'i Catalonia, Aquitaine, Ariège, Vizcaya ary Guipúzcoa. Noho ny fahalianany, ny zava-misy fa mety amin'ny mpihaino rehetra sy amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena izy, tamin'ny 2004, ny Ruta del Ferro dia nahazo fanamarihana tamim-boninahitra ny filankevitr'i Eropa.
Làlan'ny lalan'ny ral
Mba hahafahanareo manao ny Route Ferro mianakavy, dia arosonay ny làlan'ny lalana Ral, eo anelanelan'ny tanànan'ny La Cortinada sy Llorts, izay atao mora foana, ary tsy misy fitoviana sy mahafinaritrafomba fijery dable.
Ny lalan'ny Ferro dia manomboka eo akaikin'ny fiantsonan'ny fiara Llorts Mine, ahafahan'ny fiara mijanona. Na ny lalana midina izay ho entintsika mankany La Cortinada sy ilay toeram-pitrandrahana dia eo akaikin'ny parking ihany.
Ity toeram-pitrandrahana ity dia tena nifandray tamin'ny mponina tao amin'ireo vohitra an-tendrombohitra ireo. Amin'ny fahavaratra, omena mpitsidika ny fahafahany hanao fitsidihana mitarika ao anatin'ny toeram-pitrandrahana ary koa hahita ny fampiratiana maharitra ireo sary vongana ankehitriny antsoina hoe Camino de los Trajinantes ary koa ny fahazoana mandeha amin'ny lalan'ny Iron Men.
Miaraka amin'ny toeram-pitrandrahana Sedomet sy Ransol, ny Llorts Mine dia namahana ny forge tao amin'ilay faritra, na dia efa-taona aza no niasa ity farany noho ny habetsaky ny vy hita tao anatiny.
Raha mandray ny lalana eo alohan'ny toeram-pitrandrahana isika dia hahita teboka samihafa voamarika amin'ny isa izay manondro ireo toerana mahaliana amin'ny làlan-kaleha.
Andininy 1: vatolampy metamorphika izay nentim-paharazana nampiasaina hananganana ny tampon-trano ao Andorra.
Andininy 2: loharano voajanahary misy vy be ao ambaniny.
Andininy 3: Miatrika faritra mando be izahay izay misy mosses sy zavamaniry kely hafa.
Andininy 4: Misy eo amin'ny ankavia ny lalana mankany Bordas de Ensegur. Tamin'ny andro taloha, ny olona avy amin'ny vohitra dia niakatra teto tamin'ny fahavaratra niaraka tamin'ny ombiny mba handany ny vanim-potoana. Izy io dia tranonkala misy kabine sy faritra ahitra maro. Ho fanampin'izany, ao amin'ny lohasaha Ensegur dia azonao atao ny manao canyoning.
Andininy 5: Avy eto dia azonao atao ny mandinika tsara ny zavamaniry ao amin'ilay faritra
Andininy 6: izy dia somary midina ambany kokoa, izay arovan'ny rindrina vato antsoina hoe rindrina vato maina izay manakana ny fidiran'ny omby amin'ny transhumance.
Andininy 7: Hitantsika ny Tetezana Les Moles, lakroa iray eo anelanelan'ny lalana Tal sy ilay mankany Llorts. Rehefa afaka metatra vitsivitsy dia ho hitantsika ny ala iray miaraka amin'ireo sary sokitra 7 an'ny Iron Men avy amin'ilay artista frantsay Rachid Khimoune.
Andininy 8: mitohy midina ny zotram-by ary miankavanana ny Puente del Vilaró, akaikin'ny faritra fitsaharana. Fotoana fohy taorian'izay dia nandalo amina vavahady ny arabe sy ny vavahady Vilaró, izay nahazoana vy tamin'ny fampihenana mivantana ireo mineraly nalaina tao amin'ireo toeram-pitrandrahana.
Andininy 9: Aorian'io teboka io dia manohy ny fidinan'ny lohasaha eo anelanelan'ny kijana lehibe isika ary mamela lalana samihafa amin'ny ankavia izay miakatra mankany amin'ny lohasahan'ny Ensegur. Efa hitantsika ny trano Arans any aoriana eo ankavanana. Raha manohy mandeha isika dia tonga eo amin'ny tetezan'i Arans.
Andininy 10: Rehefa manakaiky kokoa an'i La Cortinada isika, dia miha manakaiky hatrany ny reniranon'i Valira del Nord. Amin'ity faritra ity dia manana loko mena ny rano noho ny habetsaky ny vy ao anaty ny tany entiny. Manaraka ny lalana izay mandalo ny mas de Soler, dia tonga tany La Cortinada izahay.
Miampita tetezana iray mankany amin'ny moron'ny renirano hafa izahay, dia tonga tao amin'ny famarotan-tsofa Cal Pal sy ny fikosoham-bary, trano roa nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ny Tourist Office dia manolotra fitsangantsanganana voatarika mandritra ny fahavaratra.
Andininy 11: Rehefa niampita ny arabe isika dia nahita ny iray amin'ireo tandindon'ny lohasaha Ordino noho ny harena ara-javakanto sy ara-kolontsaina: ny fiangonan'i Sant Martí de La Cortinada (1: 00h - 1.330m). Ny tranobe dia mifamatotra amin'ny lalan'ny vy satria ny baran'ny alitara lehibe sy ny trano fiangonana amin'ny lafiny dia vita amin'ny vy avy amin'ilay faritra.
Ho an'ny fiverenana dia mila manafoana ny lalana rehetra ianao ary afaka adiny iray dia hiverina any amin'ny Llorts Mine ianao.
Torohevitra hanatanterahana ny zotra Ferro
Sintomy ny fampiharana fiarovana an-tsaha izay ahafahan'ny mpandeha an-tongotra mandefa ny toerana misy azy ireo hamonjy ekipa amin'ny vonjy taitra.
Fanajana ny natiora: ankafizo ny ambanivohitra ary avelao araka ny nahitanao azy.
Misotroa matetika kely. Ration rano haharitra ny lalana rehetra.
Raha mahatratra faritra iray izay heverinao fa mampidi-doza na tsy takatry ny sainao izany dia tsara kokoa ny mihodina.
Zahao ny toetr'andro momba ny toerana, daty ary ora fiaingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Làlana Ferro any Andorra
Inona no ho hita ao Polignano a Mare